Kaloriin Dioxide, Nbr Latex, Barium Kaarboonate, Kaarboonate Strontium - FIZA
Dabka Qiimaynta Dabka
Dabka Assay Cupel
Kiniiniga Dioxide Kiniiniga
Chlorine Dioxide Mid Ka Mid Ah Budada
Chlorine Dioxide Laba Xirmooyinka Qalabka
Chlorine Dioxide Sachet 20G (Waa la sii daayay)
Chlorine Dioxide Sachets 20G (Si dhakhso leh)
Kaloriin Dioxide Gel Powder
Nadiifiye Hawo Koloriin Dioxide
Shirkadeena waxaa la aas aasay sanadkii 2005 waxayna xarunteeda dhexe ku taala shijiazhuang oo ah muuqaal qurxoon oo Shiinaha ah. Ganacsiga ugu weyn waxaa ka mid ah soo saarista iyo iibinta kiimikada macdanta iyo dab daminta dababka wax soo saarka, iyo sidoo kale dhoofinta tikniyoolajiyadda dioxide. Shirkadeena, oo hadafkeedu yahay hawlgal joogto ah iyo horumar waara, waxay marwalba ku adkeysaneysaa caqiidada u hogaansan si loo dhiso sumcad shirkadeed oo wanaagsan iyo in lagu guuleysto suuqa iyo macaamiisha tayada wax soo saarka wanaagsan iyo adeegga aan la ilaalin.
Daacadnimadu waa aasaaska
Shirkaddu had iyo jeer waxay u hoggaansantaa mabda'a iimaanka wanaagsan
Ku guuleysta suuqa iyo macaamiisha alaab tayo sare leh.
Ku kasbato kalsoonidaada iyo taageeradaada adeegga daacadda ah iyo alaab tayo leh
Saamaynta fayraska covid-19 ee NBR latex
NBR latex wuxuu soo bandhigayaa sifooyin aad u fiican sida iska caabbinta saliida iyo kiimikooyinka kale taas oo ka dhigaysa iyaga kuwo aad loogu jecelyahay soo saarida qalabka difaaca inta badan galoofyada waaxda warshadaha & caafimaadka. Galitaankan sii kordhaya ayaa la rajeynayaa inuu ku abuuro fursado ku filan nit ...
Hordhaca koloriin dioxide
Chlorine dioxide (ClO2) waa gaas huruud-cagaaran leh ur u eg koloriin leh qaybsi heer sare ah, dhex gal iyo awood nadiifin madhalaysnimo awgood. In kasta oo koloriin dioxide magaceedu ku jiro chlorine, haddana sifooyinkeedu aad bay u kala duwan yihiin, sida kaarboon laba ogsaydhku waa u kala duwan yahay ...
Ku soo dhowow FARSAMADA FIZA
HEBEI FIZA TECHNOLOGY CO., LTD waa soo saare kiimiko oo isku dhafan iyo soo-saare. Waxaan ku takhasusay soo saarista iyo dhoofinta kiimikooyinka kuwaas oo loo adeegsado adeegyo badan oo kala duwan oo ku saabsan quudinta, bacriminta, cuntada, beeraha iyo daaweynta biyaha, sida sodium chlorite, chlorine d ...
Shirkadeena waxaa la aas aasay sanadkii 2005 waxayna xarunteeda dhexe ku taala shijiazhuang oo ah muuqaal qurxoon oo Shiinaha ah. Ganacsiga ugu weyn waxaa ka mid ah soo saarista iyo iibinta kiimikada macdanta iyo dab daminta ka faa'iideysiga alaabta, iyo sidoo kale dhoofinta tikniyoolajiyadda dioxide ……
Dhismaha Zhongyuan No.368 Youyi North Street Shijiazhuang China